China Camouflage အင်္ကျီ / SH-1016 စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ | ကျိုင်းတုံ
ပြောက်ကျားအင်္ကျီ / SH-1016
အထည်အလိပ် 100% polyester ပုံနှိပ်ယက်ထည်; နံရံ: Bejirog သားမွေး; ဖြည့်: ပိုးကဲ့သို့အခင်း 180g
ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ: T / T, L / C
ဆက်စပ်ပစ္စည်းSilicon တံဆိပ်၊ Elastic binding၊ ပိုက်ကြိုး၊ ပလတ်စတစ်ဇစ်
မှတ်ချက်- ပုံနှိပ်ခြင်းအားလုံး -
ရာသီဥတုအေးသောကြောင့်လူများစွာသည်ချည်ထည်ရှည်သောအဝတ်များကိုရွေးချယ်ကြသည်။ ၎င်းသည်ရှည်လျားသောပုံသဏ္clothesာန်ရှိသောအဝတ်အစားများကိုဝတ်ဆင်ရန်တကယ်ပင်စိတ်ရှုပ်ထွေးနေသော်လည်းပုံသဏ္toာန်တိုသောအဝတ်အစားများကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်နွေးထွေးရန်မလုံလောက်ပါ။ ဒါကြောင့်အသင့်တော်ဆုံးတစ်ခုကဝါဂွမ်းဖြစ်သင့်သည်။တိတ်ဆိတ်အင်္ကျီ.
ဒီဒီဇိုင်း၏ အင်္ကျီဖက်ရှင်နှင့်လှပသောသာမကလှုပ်ရှားမှုများအတွက်လည်းအဆင်ပြေသည်။ လူများစွာ၏ရွေးချယ်မှုလည်းဖြစ်သည်
ဒီလိုမျိုးဖုံးအုပ်ထားတာပါ အင်္ကျီဖက်ရှင်နှင့်ဝတ္ထုဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်တော်ဝင်ပြာရောင်အရောင်ကိုပိုက်အဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်အပိုင်းအစတစ်ခုလုံးကိုအနည်းငယ်သာအလှဆင်နိုင်ပြီးအဝတ်အစားများကိုကလေးသူငယ်နှင့် ပို၍ ပျင်းစရာကောင်းစေသည်။ ကြာရှည်ခံပြီးလက်တွေ့ကျသောအရည်အသွေးကိုထင်ရှားစေသည်။ အပြည့်ပါသောအထည်သည်အတွင်းပိုင်းချည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအရည်အသွေးမြင့်အထည်ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်သာယာလှပပြီးလှပသောအပြင်အပူနှင့်အပူဒဏ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီးအပူဒဏ်ကိုခံနိုင်သည်။
3. ဖြတ်တောက်ခြင်း 4. emboridery / ပုံနှိပ် 3. ပြင်ဆင်နေ 1.design ပန်းကန် 2.fabric
6.quality ထိန်းချုပ်မှု 5.sewing 8.package 7.ironing
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူ hooides ပြုလုပ်ရန်စိတ်ကြိုက်တံဆိပ်နှင့် tag ဝန်ဆောင်မှုကိုပေးပါသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိမေးမြန်းစုံစမ်းမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ကြိုဆိုပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီတွင်စက်ရုံများရှိပြီး XIYINGYING (FUJIAN) DRESS & WEAVING CO ။ , LTD ။ ကို ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး， ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သော Shishi XiYangYang Children Clothing Co. , Ltd. ကို အခြေခံ၍ တီထွင်ခဲ့သည်။ အနှစ် ၂၀ ကျော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးနောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် ချည်ထည်နှင့်ရက်လုပ်သောထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနယ်ပယ်တွင်ကျွမ်းကျင်သောကလေးများနှင့်အမျိုးသားအဝတ်အထည်လုပ်ငန်းများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုသည်ပမာဏ ၄ သန်းကျော်ရှိပါသည်။
ရှေ့သို့ Boy's padded jacket YY-2932
နောက်တစ်ခု: ယောက်ျားလေးရဲ့ padded အင်္ကျီ SH-1018
ယောက်ျားလေးရဲ့ padded ဂျာကင်အင်္ကျီ SH-759
ယောက်ျားလေးရဲ့ hoodie FK20-07
ယောက်ျားလေးရဲ့ padded ဂျာကင်အင်္ကျီ SH-764